Madaxweyne Lafta Gareen oo xalinaya xiisadahii ka dhashay doorashadii KGS – Kalfadhi
Madaxweyne Lafta Gareen oo xalinaya xiisadahii ka dhashay doorashadii KGS
Warar uu helayo Kafadhi ayaa sheegaya inuu Madaxweynaha cusub ee Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), Cabdicasiis Lafta Gareen, ka wado magaalada Baydhabo kulamo ujeedkoodu yahay ka meyridda dadka magaaladaas waxa ay ka tabanayaan habkii ay u dhacday doorashadii uu ku soo baxay.
Siyaasiyiin ay ka mid yihiin Xildhibannada iyo Bulshada Rayidka magaaladaas ayuu Lafta Gareen kala hadlayaa sidii xal loogu heli lahaa dejinta quluubta dadka Baydhabo ee la hayi kacay xiisadihii ka dhashay xariggii Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), oo la rumeysnaa inuu ahaa musharaxa kaliya ee ciriiri gelin kari lahaa Madaxweynaha cusub.
Xildhibaan Madkariim Maxamed Iftiin, oo ka mid ah Xildhibaannada deegaanka ee uu Madaxweyne Lafta Gareen la kulmay, ayaa u sheegay Kalfadhi in arrinta ku taagan Lafta Gareen ay tahay siduu xal uga gaari lahaa Xarigga Mukhtaar Roobow. “Xarigga Mukhtaar Roobow ayaa loo arkaa in ay cabad ku noqon karto habsami u socodka shaqada Madaxweynaha cusub” ayuu yiri Xildhibaan Madkariim.
Laakiin, wuxuu xusay in ay jiraan dareen kale oo ka imaanaya Xildhibaannada qaar, kaas oo soo dhaweynaya Madaxweynaha cusub. “Aad ayey u balaaran tahay rajada aan qabno, waxaana qabnaa in uu madaxweynaheena wax ka qaban doono ammaanka, horumarka, shaqa abuurka dhalinyarada” ayuu Madkariim raaciyey hadalkiisa.
Xildhibaan Maxamed Nuur Sheekh, oo kamid ah Xildhibaanada KGS, ayaa rumeysan in Madaxweyne Lafta Gareen ay hor yaalaan caqabado ay kamid yihiin ammaanka, xirnaanyishaha wadooyinka deegaannada KGS iyo arrimo kale, wuxuuse muujiyey rajo. “Balse arrimahaas oo dhan waa laga gudbi doonaa, waxayna ku jirtay balanqaadkiisa markii uu Baarlamaanka u qudbeynayey” ayuu Xildhibaanku ku yiri Kalfadhi.
Falanqeeyayaal iyo siyaasiin ay ka mid yihiin kuwa xil ka haaya Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ayaa horay ugu sheegay Kalfadhi iney Madaxweyne Lafta Gareen u taalo wax ka qabashada hawl isugu jirta mid ka dhalatay doorashadiisa iyo mid horay u haysatay dadka iyo deegaanka KGS.
Xildhibaan sheegay iney Guddoonka Golaha Shacabku wali isku mari la’yihiin arrinta Guddiga Maaliyadda